Topnepalnews.com | कांग्रेस महामन्त्रीमा कसले जित्ला ? ज्योतिषले गरे अपत्यारिलो भविष्यवाणी
कांग्रेस महामन्त्रीमा कसले जित्ला ? ज्योतिषले गरे अपत्यारिलो भविष्यवाणी
Posted on: May 03, 2016 | views: 828
२३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका लागि त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला ज्योतिषले भने अपत्यारिलो भविष्यवाणी गरेका छन् । महामन्त्रीका लागि चर्चित युवा नेता गगन थापा, गगनका ससुरा अर्जुननरसिंह केसी र विपीपुत्र शशांक कोइरालाले उम्मेदवारी दिएका छन् । धेरैले गगन थापाले जित्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
तर, यही समयमा ज्योतिषको फरक धारणा सार्वजनिक भएको हो । ज्योतिष शास्त्र हेर्दा अहिलेसम्म महामन्त्रीमा गगन थापा जित्ने देखिदैन् । ज्योतिषले शनिबार हेरेको शास्त्रमा थापाको जित्ने योग नदिएको हो । यद्यपी उक्त योग आइतबार साँझपछि बदलिनसक्ने देखिएको छ । चर्चित ज्योतिष सुनील सिटौलाले थापाको जित्ने योग नदिएको बताए । उनले भने– ‘थापाको जित्ने योग हाम्रो शास्त्रमा देखिएको छैन् । हामीले जे देख्यौ त्यही भन्ने हो ।’
उनका अनुसार ज्योतिष शास्त्रमा विपी पुत्र डा शशांक कोइराला महामन्त्रीमा जित्ने सम्भावना देखिएको छ । ज्योतिष सिटौलाले भने– ‘आजको रुलिङ प्लानेट हेर्दा त महामन्त्रीमा डा. कोइरलालाको पो चान्स देखाउँछ त ।’ ज्योतिष सिटौलाले शनिबार दिउँसो ३ बजेर ५८ मिनेटमा ज्योतिष शास्त्रको रुलिङ प्लानेट हेरेका थिए ।